Dhalada Saliida Gubida Madaxa Madiifad Weyn Oo Cad 10 mm Lab - 70mm| Dragons Head Shop
Bogga ugu weyn → Products → Nadiif ah Muraayadda Gubashada Saliidda Gubaha Madaxa Pipe 10mm Lab - 70 mm
Baakada weyn ee ku taal madaxa gubashada saliidda galaaskan qaloocan waxay wax weyn ka beddeli kartaa xaddiga qiiqa ay soo saaraan wax -soo -saarkaaga ama saliidaha lagama -maarmaanka ah. Muraayadda qaro weyn waxay sii haynaysaa kuleylka waqti dheer oo baaquli weyn wuxuu u oggolaanayaa hawo badan. Marka la isku daro waxay soo saari kartaa qiiq ama uumi cajiib ah. Ka digtoonow in aad kulaylka baaquli; kuleylka la hayaa wuxuu burburin karaa waxa ku jira isagoo ku guban kara qafis
Haddii aad ka daashay qiimo jaban, gubidda saliidda yar oo aan shaqada si habboon u qaban, kani waa gubidda saliidda ee adiga. Xiriirkeeda 10mm wuxuu oggol yahay in lagu isticmaalo heer kasta oo saliid gubiye ah ama qiiqa uumiga ah, halka dhalada qaro weyn ay ku filan tahay inay iska caabbiso adeegsiga maalinlaha ah.
Xiriirka lab 10 mm
Waxay sidoo kale la heli karaa 14 mm lab iyo 18 mm lab xiriir
Eeg ururintayada kale; dhalooyinka galaas, bongs, madax xanuun, nalalka jet -ka, Iyo maala si aad ula tagto madaxaaga cusub.
Adeeg weyn *****
Aad ayaan ugu farxay inaan helo adeeggan internetka ah. Inta u dhaxaysa gaarsiinta degdegga ah illaa xilliga Kirismaska ​​iyo daryeelka ka dib runtii waa wax aan caadi ahayn ...... Shan xiddig ayaa iga yimid
Waad ku mahadsan tahay erayadaada wanaagsan,
Kufiican baahiyadayda iyo tayo aad u fiican, si fiican loo soo baakadeeyay loona dhiibay. Waxa aan ka jeclahay goobtan ayaa ah, aniga oo markii hore halkan ka iibsaday bong, Lee wuxuu dhib u qabtay inuu ila soo xiriiro oo i ogeysiiyo inaan markii hore dalbaday cabbirka qaldan ee bong -ga aan iibsaday, oo ii oggolaaday inaan saxo amarkayga lacagtayda ha ku khasaarin wax aan waxtar lahayn. Hadda taasi waa waxa aan ugu yeero adeeg macmiil oo cajiib ah!
Waad ku mahadsan tahay Gary
Weel aad u xoog badan
Aniga ahaan cabbirka ugu fiican 10mm. Wuxuu abuuraa daruuro badan
Xirmooyin aad u weyn
Si fiican ayaa loo sameeyay: waxay ka sii dheer tahay noocyada kale